လှသွေးကြွယ်နေပြီး ချစ်စရာကောင်း တဲ့ အပြုံး ပိုင်ရှင်လေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ – Let Pan Daily
လှသွေးကြွယ်နေပြီး ချစ်စရာကောင်း တဲ့ အပြုံး ပိုင်ရှင်လေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
ပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ခါမှာတော့ စကားပြောလေးချိုသာပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေး ကတော့သရုပ်ဆောင် ဆောင်းဝတ်ရည်မေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကဇာတ်လမ်းတွဲ များစွာကိုရိုက်ကူးနေ ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ လည်းကျရာ ဇာတ်ရုပ်များကို ပီပီပြင်ပြင် နဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများကလည်းအောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ အသဲစွဲ ချစ်နေရသူလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာဒီနေ့မှာလည်းအဝါ ရောင်ပန်းခင်းတွေကြားထဲမှာ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လှရက်နေပြီး မြင်သူတကာငေးလောက်တဲ့ အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို အဆီပိုမရရှိပဲကျစ်လျစ်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကြောင့်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အားကျနေရသူလေး တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝါရောင်ပန်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်လှပေနေသူလေး ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလှဓာတ်ပုံလေးတွေကို အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိသလို ဖက်ရှင်များကိုလည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီလိုက်ဖက်အောင်ဝတ်စား တတ်သူလေး တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။” လွမ်းစေဖို့ရယ် တမင်တကာဖန်တီးတယ်ဒီဆောင်းနေ့တွေ … ဒီဆောင်းညတွေ ရှည်လွန်းတယ် …. Good morning ချစ်သူ ☀️” ဆိုပြီးကဗျာစာတိုလေးနဲ့ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ …………ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှု့လို့ရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Photo Credit- Hsaung Wutyee May( FB Account)
ပရိသတ္ႀကီးေရဒီတစ္ခါမွာေတာ့ စကားေျပာေလးခ်ိဳသာၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့အၿပဳံးပိုင္ရွင္ေလး ကေတာ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမကဇာတ္လမ္းတြဲ မ်ားစြာကို႐ိုက္ကူးေန ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာ လည္းက်ရာ ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ဆိုလည္းမမွားပါဘူးေနာ္။ သူမရဲ႕ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကလည္းေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မ်က္ႏွာေလးေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြ အသဲစြဲ ခ်စ္ေနရသူေလးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
သူမဟာဒီေန႔မွာလည္းအဝါ ေရာင္ပန္းခင္းေတြၾကားထဲမွာ အျပစ္ေျပာစရာမရွိေအာင္လွရက္ေနၿပီး ျမင္သူတကာေငးေလာက္တဲ့ အလွတရားေတြကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို အဆီပိုမရရွိပဲက်စ္လ်စ္တဲ့ ကိုယ္လုံးေလးေၾကာင့္လည္း မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြ အားက်ေနရသူေလး တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။အဝါေရာင္ပန္းေလးေတြနဲ႔အၿပိဳင္အဆိုင္လွေပေနသူေလး ကေတာ့ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေလး ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အလွဓာတ္ပုံေလးေတြကို အၿမဲတင္ေပးေလ့ရွိသလို ဖက္ရွင္မ်ားကိုလည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီလိုက္ဖက္ေအာင္ဝတ္စား တတ္သူေလး တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။” လြမ္းေစဖို႔ရယ္ တမင္တကာဖန္တီးတယ္ဒီေဆာင္းေန႔ေတြ … ဒီေဆာင္းညေတြ ရွည္လြန္းတယ္ …. Good morning ခ်စ္သူ ☀️” ဆိုၿပီးကဗ်ာစာတိုေလးနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကဲ …………ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမ ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ႕လို႔ရေအာင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျပုံ တွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
CDM မှာ ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့ ဝန်ထမ်းတွေ ကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပုံစံကြောင့် ဝန်းရံသူ အချင်းချင်း ပင်အံံ့သြသွားရစေတဲ့ ကျော်ထက်အောင်
ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းေတြ လႉဒါန္း ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္း ကိတၱိသာရ။ သမီး ျဖစ္သူ မခင္ခင္ခ ရဲ႕ေျပာျပခ်က္ (႐ုပ္သံဖိုင္)